Adeerkay ayaa ii sheegay aniga oo ah (wiil, 14 jir ah) in aan xanuunsanayo haddii aan inbaddan Siigaysto. Waxaan sameeyaa ugu yaraan halmar maalintii. Ma tahay midaasi mid aan caafimaadka u fiicnayn? – Tips for refugees
Adeerkay ayaa ii sheegay aniga oo ah (wiil, 14 jir ah) in aan xanuunsanayo haddii aan inbaddan Siigaysto. Waxaan sameeyaa ugu yaraan halmar maalintii. Ma tahay midaasi mid aan caafimaadka u fiicnayn?
Waxa aad samaynaysid gebi ahaanba waa wax caadi ah.
Xitaa haddii aad siigaysatid dhowr jeer maalintii kuma xanuunsanaysid.
Sidoo kale waa lamid gabdhaha.
Dhallinyarada ayaa mararka qaar laga reebaa in ay siigaystaan.
Dadka qaar waxay dhahaan: siigaysigu wuxuu kaa dhigayaa in aad xanuunsatid ama indhoole noqotid.
Tani run ma ahan. Kaliya waxay ay sidaan kuugu dhahayaan waxay tahay si ay kaaga cabsiiyaan.
Inta lagu guda jiro samaynta siigaysiga, inbaddan oo wiilasha kamid ahi waxay u jiidaan maqaarka kore ee xubinkooda taranka hore iyo gadaal.
Ama waxay xoqaan ibta xubinkooda taranka.
Gabdhuhuna sidoo kale way siigaystaan.
Tusaale ahaan, ayaga oo taab-taabta kintirkooda.
Midkaana waa kuuska yar ee ku jira dhexda bishimaha xubinka taranka dumarka.
Waxa aad sidaan isugu xoqayso waxay tahay si aad u dareentid galmo ama macaan galmo.
Qaabkan sidoo kale waxaad ku dareemaysaa dareenka galmada ugu fiican, ama kacsiga.
Siigaysigu waa hab dhaqan banii’aadam dabiici ah.
Ayada oo aan la eegaynin haddii aad yartahay ama weyntahay.
Waxaad u oggaanaysaa jirkaaga si wanaagsan.
Waxaad oggaanaysaa dhaq-dhaqaaqa aad jeceshahay iyo midka aadan jeclayn.
Sidoo kale waxaad u sheegi kartaa hadhow arintan lammaanahaaga.
Hubaal kaama dhigayso in aad xanuunsatid iskaba dhaaf waxay kaa dhigaysaa in aad dareentid nafis iyo raaxo.
Posted on September 29, 2017 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Waxaa jira xuquuqo gaar ah oo loogu talogalay carruurta halkan Jarmalka. Maxaa laga wadaa midaasi?
Next Next post: Aniga oo ah (gabar, 14 jir ah) waxaa igu dhacay illaa iyo hadda seddex jeer dhiigayga caadada. Marwalba waxaa jiri jirtay hakad ah kudhowaadkii hal bil inta u dhaxaysa. Si kastaba, hadda ma uusan iga imaanin dhiiga afar bilood. Miyaan Xanuunsanahay?